အိမ်ခြံမြေ ရောင်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၁၇၅၀ စတုရန်းပေ၊ မရမ်းကုန်း ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒို (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဂမုန်းပွင့်ကွန်ဒို အကျယ်အ၀န်း (1750 sqft) ကျယ်ဝန်းသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း (1) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ အဲကွန်း (4)...
09-43098621, 09-428013834, 09444439412,09257998588
တိုက်ခန်း အမြန် ရောင်းရန်ရှိသည်။ ၁၅ ပေ x ပေ ၆၀
315 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဗိ်ုလ်တထောင်တွင်တည်ရှိသည်။ ဗိ်ုလ်တထောင်ဘုရား ၊ ဧရာဝတီဘဏ် ၊ တက္ကသိုလ်အနီးတွင် တည်ရှိသည် မီးမှန် ရေမှန်သည် အမှတ် ၂၇ အခန်း ၁၁ ဗိုလ်တထောင်လမ်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့...
၁၃၅၀ စတုရန်းပေ၊ ရွှေဂုဏ်သူကွန်ဒို (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
- ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရွှေဂုဏ်သူကွန်ဒို - အကျယ်အ၀န်း (1350 Sqft) ကျယ်ဝန်းသည်။ - မာစတာအိပ်ခန်း (1) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း (၂) ခန်း၊ အိမ်သာ (၂) ခန်း ပါဝင်သည်။...
စမ်းချောင်းမြို့နယ် , စစ်ကိုင်းလမ်း , ၄လွှာတိုက်ခန်းရောင်းမည်
470 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်စစ်ကိုင်းလမ်းတိုက်​ခန်းရောင်းမည်​ 🏩🏩🏩 သိန်း - 470 ( ညှိနှိုင်း ) 💰💰💰 စမ်း​ချောင်းမြို့နယ်​ လင်းလွန်းမြောက်ရပ်ကွက် ရှမ်းလမ်းဈေး(ဂွဈေး)...
မရမ်းကုန်း အေ၀မ်းလမ်းသွယ်တွင် အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
9,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်း အေ၀မ်းလမ်းသွယ် လုံးချင်း ၂ထပ် (50x60) 6MBR,10AC,Water Heater , Mini Bar ပါကေး နိုင်ငံခြားစတိုင်ပြင်ဆင်ထား တိုက်သစ် နေရာကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့်လေဆိပ် ၉မိုင် Ocean၊ ၀ိတိုရိယဆေးရုံး၊ ၈မိုင် Junction-8...
09-43098621, 09-428013834, 09-444439412
Royal Sin Minn Condo တိုက်ခန်းသစ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ ( အလုံ )
3,200 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရုံးခန်း ၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော ( 1600 စတုရန်းပေ) ကျယ်ဝန်းသည့်အခန်းဖြစ်သည်.. အခန်း (2MBR, 1BR) ခန်းဖွဲ့ပေးထားပါသည်... ပါကေးခင်းထားပြီး...အသေးစိတ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်....
09 4310 8920, 09 45030 3770, 09 45030 3880
အလုံမြို့နယ် ကွန်ဒို တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
4,695 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အလုံမြို့နယ် Hill Top vistar (1878sqft) 2MBR 2BR ပြင်ဆင်ပြီး 1sqft 2.5L
0943089164 09799231198 09256113342
ရန်ကင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
7,700 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရန်ကင်း၊ ပါရမီ၊ 3ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ မြေအကျယ်အ၀န်း(45'x58'),အိမ်အကျယ်အ၀န်း(42'x50'), 5MBR, 1BR, ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည် ပြည်လမ်းသွယ် ၇မိုင်
16,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် (80 x 80) 2RC မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း (1) ခန်း၊ အိမ်သာ (1) ခန်း ပါဝင်သည်။ ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက...
လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည် သုဝဏ္ဏ VIIP I အင်ကြင်းမြိုင်လမ်း
12,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (24 x 75) 2RC ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
8,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ VIP(2), 3ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ မြေအကျယ်အ၀န်း(40'x70'), 4MBR, အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
400 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဗဟိုလမ်းမ​ပေါ် ၊ တိုက်​သစ်​ ၊ City Mart အနီး ၊ ​ဈေး​ကျောင်းတို့နှစ်​နီး ၊ ပြင်​ဆင်​ပြီး အိပ်​ခန်းတစ်​ခန်း ၊ အသင့်​​နေ ၊ အခန်းကျယ်​ ၊ ၁၈​ပေ x၅၅​ပေ ၊ ၄လွှာ ၊ သိန်း၄၀၀(ညှိနှိုင်း​ဈေး) ##...
မြောက်ဥက္ကလာပ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
​မြောက်​ဥက္ကလာ ယုဇနလမ်း 15'x55' 1BR , 2Ac , ပါ​ကေးခင်း, ဆိုဖာ , စတီ , ဘုရားစင်​ , ထမင်းစားခုံ , F-F , 1F 500ls.
365 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ကြယ်ဝန်းစံ ဆောက်လုပ်ရေး နေထိုင်ခွင့်ကျပြီးတိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိပါသည်။ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ၉ရပ်ကွက်၊ ကျော်သူ ၁၉လမ်း၊ ၁၉ပေ×၅၄ပေ ၆လွှာ=365သိန်း ၅လွှာ=435 သိန်း မြေညီ ၁၇ပေ ထပ်ခိုးပါ=1100 သိန်း
for sale in ko htet agent
#​ဈေးနှုန်းတန်​ လုံးချင်း ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​ #1Sqft 160000 ​ဈေးသာကျပါသည်​ မင်္ဂလာပါခင်​ဗျာ လူကြီးမင်းတို့အား ​ဈေးနှုန်းတန်​ လုံးချင်းအ​ရောင်း​လေးနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးပါ့မယ်​...
မုဒိတာအိမ်ရာ(2) အင်းစိန် ၊ ပေါက်တောဝအနီးတိုက်ခန်းများရောင်းမည်။
145 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မုဒိတာအိမ်ရာ (2) အင်းစိန် ၊ ပေါက်တောဝအနီး ၊ မြေညီရှေ့ခြမ်း = သိန်း (380 - 350 ) ကြား မြေညီနောက်ခြမ်း = သိန်း (225 - 200 ) ကြား ပထမအလွှာ = သိန်း (180 - 160 ) ကြား ဒုတိယအလွှာ = သိန်း (160 - 150 ) ကြား တတိယအလွှာ = သိန်း (170 - 160 )...
095142458, 0931331549, 09965142458, 09785142458
အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံ ဖြစ်သော ရွှေဇမ္ဗူဒိပ်ကွန်ဒိုတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
4,200 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရွှေဇမ္ဗူဒိပ်ကွန်ဒို၊ River View, 2100sqft, 2MBR, 2BR, 5AC, 4200 သိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်တည်ရှိသော ကွန်ဒိုမီနီယံ တိုက်အသစ်ဖြစ်သည်။
600 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အလွန်တန်သောဈေးနှင့်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီးမြေညီတိုက်ခန်းကျယ်ရောင်းလိုသည် ပရိဘောဂအစုံMitsubishi အဲကွန်းအသစ်နှစ်လုံး ကားပါကင်အလုံးစုံပြင်ဆငီပြီး၁၈/၅၄ပေအကျယ်လူမနေရသေးသောတိုက်အသစ် .....
09 253559688/ 09794584470
150 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
မုဒိတာ(၂)အင်းစိန် (15x45) ၊ 1MBR , ​ရေချိုးခန်းအိမ်​သာ ​ကြွေပြားကပ်​ပြီး , ၈လွှာ_(150)သိန်း ၇လွှာ/၆လွှာ_(160)သိန်း ၅လွှာ_(170)သ်ိန်း ၄လွှာ_(180)သိန်း ၃လွှာ_(190)သိန်း ၂လွှာ_(200)သိန်း ၁လွှာ_(210) /...
09421102138 - 0930284661 - 09420287385
820 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မင်္ဂလာရှိသောသီတင်းကျွတ်ကာလမှာ မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ... အဆောက်အဦးကြီးမားခိုင်ခန့်ပြီး...
095140630 , 09785140630
လှိုင်သာယာ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
12,000 သိန်း (ကျပ်) | စက်မှုဇုန်
မြေ ( 1.6 ) ဧက ဂို( 28000 Sqft ) 315KVA 12000သိန်း
095052054 /09450065499 /09428036767 /098615699
မရမ်းကုန်းမြို့ **(၃)ရပ်​ကွက်​ သာယာ​အေးလမ်းသွယ်​ ** အခန်းကျယ်​ 15'x50' ** ပြင်​ဆင်​ပြီး အသင့်​တတ်​​နေရုံ ** အိပ်​ခန်းတစ်​ခန်း ,ပါ​ကေးခင်း , ​ရှေ့​နောက်​၀ရံတာပါ, ​ကောနစ်​ပြင်​ထား ,...
32,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ရန်ကင်း၊ ပါရမီ၊ ဇီဇ၀ါလမ်း၊ 2ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ အကျယ်အ၀န်း(70'x140'), 9MBR, 2RC, အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ပြည်တော်အေးရိပ်သာ၊ 3ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်၊ 6MBR,1BR, ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
မြောက်ဥက္ကလာ ရွှေပေါက်ကံ ဂုံးကျော်တံတားအဆင်းရှိ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
2,700 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
(60'×80')မြေကွက်၂ကွက်တွဲ အမြန်ရောင်းလိုပါသည်။ မြေဖို့ပြီးသားဖြစ်ပြီး ထောင့်ကွက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ရွှေပေါက်ကံ ဂုံးကျော်တံတားအဆင်းရှိ (၂၂ရပ်ကွက်/VIPကွက်တွင်တည်ရှိသော)မြေကွက်ကျယ်...
3,450 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံရှိအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသောနေရာကောင်းလုံးချင်းတိုက်သစ်ရောင်းမည်။ =•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•= မြို့နယ်၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ ၊ ဘဏ်များ ၊ ဈေး /...
ဒဂုံမြို့ သစ် ဆိပ်ကမ်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
6,500 သိန်း (ကျပ်) | စက်မှုဇုန်
မြေ ( 1.4 ) ဧက ဂို( 10000Sqft ) 6500 သိန်း
၁၂ပေခွဲ x ၅၀ပေ အပေါ်အောက်သံပန်းပါ ဝရံတာနှစ်စုံ အပေါ်အောက်မိန်းတံခါးမကြီးနှစ်စုံ အပေါ်အောက်ရေချိုးခန်းအိမ်သာ နှစ်စုံ ကြွေပြားအပြည့်...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် နေရာကောင်းတွင် လုံးချင်းတိုက်နှင့်ခြံ ရောင်းရန်ရှိသည်။
8,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
အကျယ်အ၀န်း 40x60 ပေရှိသည့် ခြံဝင်းနှင့် ခြံဝန်းအတွင်း နှစ်ထပ်ခွဲတိုက် ပါရှိကာ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်လိုသူများ ၊ ငွေပို၍ ရင်းနှီးထားလိုသူများ အတွက် ၀ယ်ယူထားရန် အထူးသင့်တော်သည်။
09 97790 1501
10,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မရမ်းကုန်း၊ ကုန်းမြင့်ရိပ်သာ၊ ၇မိုင်၊ 2ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ 1MBR,2BR, မြေအကျယ်အ၀န်း(0.059ဧက)၊ အိမ်အကျယ်အ၀န်း(30'x100'), နှစ်(၆၀)ဂရန်၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်
7,800 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
အကျယ်အ၀န်း 4650 စတုရန်းပေရှိပြီး ဂရန်မြေကွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ထပ်တိုက်ပါရှိပြီး အသင့်နေပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
Green Lake Condo တွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
3,500 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Green Lake Condo - 1MBR, 2BR, Carparking, Swimming Pool, GYM internet, Security staff - 1639 Sqft - အလွှာမြင့်
B.B.B Car Showroom အနီးတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိပါသည်
30,000 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ကမ္ဘာအေးလမ်းမမေးတင် ၊ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာမျက်စောင်းထိုး ၊ B.B.B. Car Showroom တစ်ကွက်ကျော် ၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ အကျယ်အဝန်း (၃၅ ပေ × ပေ ၅၀) + (၃၅ ပေ × ၉၂ ပေ) ၊...
လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည် သုဝဏ္ဏ VIP II
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (40 x 70) 3RC မာစတာအိပ်ခန်း(၄)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Gems Condo တွင် (1500sqft) အမြန်ရောင်းမည်၊
လုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်နေထိုင်ရန်အတွက်အထူးကောင်းမွန်သော တက်လမ်းအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ (အသင့်နေနိုင်)...
1,850 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
နေထိုင်ရန်နှင့် ဘဏ် ၊ ဆေးခန်း ၊ စတိုးဆိုင် ၊ အလှပြင်ဆိုင် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ၊ကုန်မျိုးစုံဆိုင် နှင့်ရုံးခန်း အစရှိသော...
1,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
အင်းစိန်​လမ်းမကြီးအနီး (1min)သာဝင်​ရ.. ​ဈေးနီး (1min)သာသွားရ.. လမ်းသန့်​ ရပ်​ကွက်​သန့်​ .. ကားမှတ်​တိုင်​နီး.. အိမ်​ထဲကားထားလို့ရ.. 15'x50' ဘိုးဘွားပိုင်​​မြေ (​မြေပိုင်​​မြေ).. 2.5RC...
ကမာကြည်လမ်းမကြီးအနီးတွင် လှပသပ်ရပ်သော အသင့်နေထိုင်နိုင်သည့် တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
355 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တိုက်ခန်းအကျယ် 18 x 50 ပေ အကျယ်ရှိပြီး အိမ်ရှေ့ပါကေးခင်း၊ အိမ်နောက်ကြွေခင်းထားသည်။အိပ်ခန်း ၁ ခန်းအပြင် ပရိဘောဂအစုံလည်းပါရှိသည်။6F အပေါ်ဆုံးထပ်ဖြစ်ပါသည်။လူနေထိုင်ခွင့်ကျရန်...
09 97790 1506
၀ါးတစ်ရာ စက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
5,000 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
မြေ (2.1 ) ဧက ခြံခေတ်ပြီးလယ်ရှင်းပြီး 1ဧက 2500သိန်း
6,500 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်၊ သစ္စာလမ်းမပေါ်ရှိ အကျယ်အ၀န်း 50x60 ပေရှိသော ရေမီးစုံပါ မြေကွက်သီးသန့် အရောင်းဖြစ်သည်။
1,600 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
မဟာဆွေကွန်ဒို - 1 Master & 1 Single Room,3Air-con, Car-Parking, Swimming Pool, ပြင်ဆင်ပြီး - အလွှာမြင့် - 1100 Sqft
လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း ၄ထပ် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
24,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
လှိုင်မြို့နယ်အတွင်း၊ 4RC ၊ 1 Acreaအကျယ်အ၀န်းရှိ၊ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
(၆၈၀၀ စတုရန်းပေ) မေခအိမ်ရာ၊ လုံးချင်းအိမ် (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
18,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
လိပ်စာ မေခအိမ်ရာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ အိမ်၊ ခြံ ဖွဲ့စည်းမှုပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းအရာ မာစတာ(၇)ခန်း၊ အိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲကွန်း၊...
အင်းစိန်၊ဖော့ကန် သီရိလမ်း အမှတ်၁၅ မြေညီထပ်၊တစ်အိမ်လုံးကြွေပြားခင်းပြီး၊ဈေးနူန်းညှိနိူင်းနိုင်ပါသည်။ ၊Hall type ဆေးရုံးနီး၊City Mart နီး၊Orange အနီး၊ဈေးနီး၊ကျောင်းနီး၊KBZ bank နီးပါသည်။
၄၅၅ဝ စတုရန်းပေ, Lake Side Villa (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
19,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ကန်နှင့်ဆက်စပ်လျှက် ၊ ကန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ အက်မ်အမ်အိုင် စီးတီး၊ မြေအကျယ် ၁၂ဝဝ စတုရန်းပေ၊ ကြမ်းခင်းဧရိယာ ၄၅၅ဝ စတုရန်းပေ၊ ပန်းဥယျဉ်နှင့် အလှဆင် ရေတံခွန်၊...
ထောက်ကြန့် မြို့ လမ်းဆုံအနီး ပြည်လမ်းမကြီး လမ်းသွယ်တွင် ကျယ်ဝန်းသောခြံနှင့်နေလိုသည်ဖြစ်စေ ,အဆောင်များဆောက်ပြီးငှားလိုသည်ဖြစ်စေ ၆၀' ၁၂၀' အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းရန...
မင်္ဂလာဒုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,600 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ထောက်ကြန့် မြို့လမ်းဆုံအနီး ပြည်လမ်းမကြီးသွယ်တွင် ကျယ်ဝန်းသောခြံ နှင့်နေလိုသည်ဖြစ်စေ အဆောင်များ ဆောက်ပြီးငှားလိုသည်ဖြစ်စေ ရောင်းရန်ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်း ၆၀ ' ၁၂၀' တွင်တစ်ထပ် ခွဲ...
09429132766 / 0931650646
ဗဟန်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,700 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် 2MBR,1BR,4AC,ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ပြီးအမြန်ရောင်းမည်။
၈၀ပေ × ၅၀ပေ၊ (ဘိုးဘွားပိုင်မြေ) နေရာကောင်းထောင့်ကွက်
3,000 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ကွင်းမွှေးဗဟိုလမ်းနှင့် ကွင်းမွှေး(၁)လမ်းထောင့် အကျယ်အ၀န်း (၈၀ပေ × ၅၀ပေ) ကျယ်ဝန်းသည်။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ထောင့်ကွက်၊ နေရာကောင်း၊ ရေ/မီး...
Star City Condo ရောင်းရန်ရှိသည် ( ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်)
သံလျင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,500 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
938 sq/often, 1 MBR,1 SBR,3 AC, lift, fully furnished - Car parking (ညှိနှိုင်း) ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ဘောက်ထော်၊ 2ထပ်လုံးချင်း၊ 2MBR, 2BR, မြေအကျယ်အ၀န်း(65'x55'), အိမ်အကျယ်အ၀န်း(55'x45'), ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်၊
Hill Top Vista Condo တွင်(1900sqft)ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
3,800 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အလုံမြို့နယ်တွင် 3MBR, အကြမ်းထည် အမြန်ရောင်းမည်။
မြေ ( 2.148 )ဧက ခြံကာပြီးထားသော မြေကွက်ရောင်းမည်။
14,000 သိန်း (ကျပ်) | စက်မှုဇုန်
လိပ်စာ- လိူင်သာယာစက်မူဇုန် ၊ လိူင်သာယာမြို့ နယ်။ အကျယ်အ၀န်း - မြေ ( 2.148 )ဧက ခြံကာပြီး နေရာသင့် 1ဧက 7000 သိန်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
095052054, 09450065499, 09428036767, 098615699
ဗဟိုလမ်းတွင် ၁၇၅၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်းကျယ် ရောင်းမည်။
2,650 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗဟိုလမ်း တွင် တည်ရှိသည်။ အကျယ်အ၀န်း (25’x70’) ပေကျယ်ဝန်းသည်။ 2650 Ls မာစတာအိပ်ခန်း (1) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။...
01 521228 / 09 32337444 / 09 32337888
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်သင့်တော်သော VIP မြေကွက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်...
500 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် သင့်တော်သော ၊ အမှတ် (၄) လမ်းမအနီးရှိ ၊ လမ်း ၊ မီး အသင့်သုံးနိုင်သော ပေ ၆၀ x ၆၀ ၊ ပေ ၆၀ x ၁၂၀ ၊...
စမ်း​ချောင်းမြို့နယ်​၊ကျိုက်​လတ်​လမ်း၎လွှာ၊​ပေအကျယ်​(၂၅×၄၅)တုိက်​သစ်​Bcc ကျပြီး ဧည့်​ခန်းအကျယ်​...
1,450 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် (20 x 60) 2RC မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
2,610 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
- သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် Thu Maung Luxury Condo (4လွှာ ) - အကျယ်အ၀န်းမှာ 1957.2 Sqft ဖြစ်ပြီး Type ( B ) ဖြစ်သည်။ - Master Bedroom (2) ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း ၊ ကိုရီးယားပါကေးခင်းပြီး အသင့်နေကွန်ဒို ဖြစ်သည်။ -...
1850 sqft ၊ Aung Zay Ya Complex ၊အလုံကမ်းနားလမ်း
အလုံကမ်းနားလမ်း၊Aung Zay Ya Complex ၊ဆင်မင်းဈေးရှေ့ 1850 sqft ၊ Master Bedroom-2၊ Single Bedroom-2 အိပ်ခန်းအားလုံးနှင့်ဧည့်ခန်းတွင် ကျွန်းပါကေးခင်းထားပါသည်။ အဲယားကွန်း၅လုံး/ရှေ့ဝရံတာ နောက်ဝရံတာ/ဓါတ်လှေကားပါ/24hr...
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် နေရာကောင်းတွင် ဈေးနှုန်းတန်သော မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းမည်။
ပုဇွန်တောင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
900 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အကျယ်အ၀န်း 25x50 ပေကျယ်ဝန်းသည့် မြေညီတိုက်ခန်းကျယ်ဖြစ်ပြီး မြောင်းကြီးလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိသည့် နေရာကောင်း လူနေ၊ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း၊ သင့်တော်သော မြေညီတိုက်ခန်းကျယ်အရောင်းဖြစ်သည်။
09 97790 1509
2,410 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
- သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် Thu Maung Luxury Condo (2လွှာ ၊3လွှာ ၊4လွှာ ၊5လွှာ) - အကျယ်အ၀န်းမှာ 1873.3 Sqft ဖြစ်ပြီး Type ( A ) ဖြစ်သည်။ - Master Bedroom (2) ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း ၊ ကိုရီးယားပါကေးခင်းပြီး အသင့်နေကွန်ဒို...
*** မရမ်းကုန်း ADမီးပွိုင့်အနီးတွင် လုံးချင်းအိမ် ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် အမြန်ရောင်းမည်။
* 85×89 ဘိုးဘွား၊ ဂုတ်ကွက် RC1 * ပြည်လမ်းမနှင့် ပါရမီလမ်းမ အနီး အဝင်အထွက်သာ၊ နေထိုင်ရန်သင့် နေရာကောင်း
09 5148486/09 785148486
310 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
လှိုင်​မြို့နယ်​ ၊ ​အောင်​​မေတ္တာလမ်းသွယ်​ ၊ ရွှာမ​ကျောင်းလမ်းအနီး ၊ အင်းစိန်​လမ်းမနီး ၊ လမ်းသန့်​ ၊ ၁၁​ပေ x ၄၀​ပေ၊ ပါ​ကေးခင်း ၊ သံပန်းဆန်းရှိတ်​ပါ ၊ အဲယားကွန်း ၁လုံး ၊...
သာကေတမြို့နယ် , နဝရတ်လမ်းမကျယ် , ပေကျယ်တိုက်ခန်းရောင်းမည်
800 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
သာကေတမြို့နယ်တိုက်ခန်းရောင်းမည် ပုံတွင်ပါသောပရိဘောဂပစ္စည်းများပါသည် သိန်း_800_ညှိနှိုင်း...
ဗဟိုလမ်းမအနီး လမ်းကျယ်​ လမ်းသန့်​ တိုက်​ခန်းအမြန်​​ရောင်းမည်​
170 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်​ **(၂)ရပ်​ကွက်​ ​ဇေယျသုခလမ်းသွယ် **လမ်းကျယ်​ လမ်းသန့်​ **ဗဟိုလမ်းနီး **ကားမှတ်​တိုင်​နီး **​ဈေးနီး **အခန်းအကျယ်​ 11'x45' ** 3F (4လွှာ) ** 170ls...
အောင်သိဒ္ဓိလမ်းသွယ်တွင် တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိပါသည်
550 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မရမ်းကုန်း ၊ အောင်သိဒ္ဓိလမ်းသွယ် ၊ တိုက်ခန်း ၊ ၄ လွှာ ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၈ ပေ × ၅၅ ပေ) အိပ်ခန်း (၂)ခန်း ၊ လူမနေရသေး ၊ တိုက်သစ် ၊ ကြွေပြားခင်း ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက် ၊...
Orichid Condo တွင် (2050sqft)ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
အလုံမြို့နယ်တွင် (2050sqft)3MBR,4AC,Ph Full Fur ပြင်ဆင်ပြီးအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်၊
ဗဟန်း ရန်ကင်းစင်တာ အနီးရှိ ကွန်ဒို အခန်းကျယ်(သစ်)ရောင်းမည်။
2,500 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
*- အခန်းကျယ် (1685) sqft -2Master bedroon & 1 Bedroom - Extra Service ; Swimming pool, GYM, 24 hr Security, Generator, Auto power backup - ကားပါကင် တစ်ခန်းတစ်စီး ရပါတယ် - 24 နာရီ လုံခြုံရေးရှိ Myanmar Plaza,Yankin Center တို့နဲ့ နီးတဲ့ အတွက် သွားလာရ လွယ်ကူပါတယ် * အသေးစိတ်...
09 260 996 995/ 09 260 996 994
2,000 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် (1400)sqft 1F မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး Star City Condo ရောင်းရန်ရှိသည်။
အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီး ၊ ( 925 စတုရန်းပေ ) ကျယ်ဝန်းပါသည်... ရေကူးကန် ၊ ကားပါကင် ၊ GYM ၊ လုံခြုံရေး ၊ ရေ မီး ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း အပြည့်အစုံ ပါဝင်သည်...
300 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မိုးသီးဆေးခန်းအနီး၊ ရန်ပြေ(18)လမ်း (အနောက်) 4လွှာ ၊ 13ပေခွဲ x 54 ပေ ၊ ကြွေပြားကပ် ၊ပါကေးခင်း၊ဆေးပြန်သုတ် ၊ရှေ့ဝရံတာ- နောက်ဝရံတာ ဆန်းရှိတ်တပ်ပြီး ၊မီးကြိုးများအားလုံး အသစ်ပြန်လဲ...
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်,ခေမာသီလမ်းမကြီး(မကြာမီလေးလမ်းသွားလမ်းမကြီးခင်းတော့မည် 40'×60'ပေ, ပေပိုအနောက် 40'ပေ, 40'×100 မြေကွက်ရောင်းမည်...
4,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
စီးပွားရေးလုပ်ရန်သင့်တော်ကောင်းမွန် , ဘဏ်ဖွင့်ရန်သင့်တော် ကွန်ဒိုဆောက်ရန်သင့်တော် ,...
(1700) sqft 18F ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် မာစတာဘတ်(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ ပရိဘောဂအစုံ ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်သော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
လမ်းမတော်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
6 Floor with Mezannine, 12.5 x 53 Feet ( Hight 13 Feet ) Near KBZ & Junction MawTin Windy, Nice Enviroment & Good Location
205 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တည်နေရာ = သမိန်ဗရမ်းလမ်းမမှ (၄)တိုက်မြောက်၊အာသောကလမ်းမေးတင်၊တာမွေမြို့နယ်။ အကျယ်အ၀န်း = (15'×60') Building Type =7Storey Floor No. = 7လွှာ(ထပ်ခိုးတစ်ဝက်ပါ) Room Type = အခန်း(၁)ခန်းပါ ဈေးနှုန်း = 205 သိန်း မှတ်ချက် -...
1,850 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အောင်ဇေယျလမ်းမ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း (1950 sqft) ကျယ်ဝန်းသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (1) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း (3) ခန်း၊ အိမ်သာ (3) ခန်း၊ ပါကေးခင်းထားပြီး၊...
0943089164, 09799231198, 09256113342
ရန်ကင်း ကျောက်ကုန်း မှာ ရှိတဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒို အခန်းသစ် ရောင်းမည်။
2,200 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Myanmar Plaza , Yankin Center , အင်းယား ကန်ဘောင်တို့ ကို ငါးမိနစ်လောက် ကားမောင်းလိုက်တာနဲ ရောက်ပါတယ် - အခန်းကျယ် (1375) sqft - 1 Master bedroon &2Bedroom -4Aircon - Water heater -well decoration - လမ်းမျက်နှာစာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်...
09 260 996 995/ 09 260 996994
3 Rc at Bominyaung street for Sale . (ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းရှိ ၃ ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်)
4,320 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
Location - Bominyaung Street , North Dagon Tsp , Yangon Area - 2400 Sqft Type -3RC Room Type - Hall Type , Electricity and water available ... တည်နေရာ - ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း ၊ မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ အကျယ်အဝန်း - ၂၄၀၀ စတုရန်းပေ အမျိုးအစား - ၃...
အလုံမြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းရှိ အောင်ဇေယျ Condoတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရှိသည်။
အလုံမြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းရှိ အောင်ဇေယျ Condoတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန် ရှိသည်။ - 2400 sqft - Master Bed Room2- Single Bed Room2- Air Cons5- ပါကေး *** ဈေးနှုန်း - ၃၅၀၀သိန်း (ညှိနှိုင်း) *** - နေရာကောင်း - နေထိုင်ရန်သင့် -...
(25'x50') ကျယ်ဝန်းသော တိုက်သစ်ရောင်းမည်။
1,450 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဖျာပုံလမ်း၊ကျွန်းတောလမ်းဂုတ်တိုက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်။(25'x50'),6th Floor, Hall Type,တိုက်သစ်၊ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ "စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး နေရာထိုင်ခင်း...
မြေ ( 1 ) ဧက၊ ဂရံ၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာစက်မှု့ဇုန်၊ ရန်ကုန်မြို့။ မြေ ( 1 ) ဧက ဂရံ နေရာကောင်း 6500 သိန်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Hill Top Condo ဒဂုံမြို့နယ် တွင် ၂၅၀၀ စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။
ဒဂုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
5,500 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Hill Top Condo ဒဂုံမြို့နယ် အကျယ်အ၀န်း (2500 sqft) ကျယ်ဝန်းသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း (3) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (1) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ ...
* GRAND SAYARSAN Condo ကွန်ဒိုမှာ ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းရောင်းမည်။
- အခန်းကျယ် (1590) sqft -2Master bedroon & 1 Bedroom -4Aircon - Water heater -well decoration - မီးစက် အခန်းအတွင်းရပါသသည်။ - လမ်းမျက်နှာစာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလင်းရောင်ရပါတယ် - ကားပါကင် တစ်ခန်းတစ်စီး ရပါတယ် - 24 နာရီ...
လှိုင်မြို့နယ်တွင် (2100)sqft 1F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၅)လုံး၊ ကြွေခင်း၊ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
11,000 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
​မြေ ၀.၁၀၈ ​ဧက ကျယ်​ဝန်းပြီး၊ junction -8နှင့်​မျက်​​စောင်းထိုးဘိုးဘွားပိုင်​​မြေ ၊စ/ ၃၀၆ ၊ပေါက်စေတီလမ်း၊အမှတ်( ၆ )ရပ်ကွက်၊၈မိုင်...
လှည်းတန်း ကမာရွတ်ရှိ Condo အသစ် ရောင်းမည်
1,900 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ကွန်ဒိုရောင်းမည် လှည်းတန်းစင်တာ စိန်ဂေဟာ လှည်းတန်းဈေးအနီး ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော sq 1328' 1 MBR, 1BR ရေ, မီး အဲကွန်း ၃ လုံးတပ်ဆင်ပီး ပါကေးခင်းပြီး ဘုရားခန်း ဧည့်ခန်း စာကြည့်ခန်း...
မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုန်တွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်
48,000 သိန်း (ကျပ်) | စက်မှုဇုန်
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မြေ ( 10 ) ဧက ခြံ နှစ်ဖက်ခတ်ပြီး 1 ဧက 4800 သိန်း
670 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မြေညီ တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ကျန်စစ်သားလမ်း ၁၈ ပေခွဲ x ပေ ၆၀( အရှေ့အဆောင်ထုတ်ထားသောကြောင့် ပေ ၆၀...
၁၈ပေ×၅၀ပေ၊ တိုက်ခန်း အသစ် ပြင်ဆင်ပြီး (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ကမာကြည်တံတားအနီး ၊ သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင်တည်ရှိ အကျယ်အ၀န်း (18 x 50 ) ပေ ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း (၂) ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။...
အသစ်စက်စက် RC ၃ထပ် မြောက်ဒဂုံ
4,300 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၂၉ ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းမကြီးဒဲ့ပေါက် လမ်းကျယ်ပေါ် မဝတ လမ်းဆုံအနီး အသစ်စက်စက် RC ၃ ထပ် တိုက် ဘုရားခန်း စာကြည့်ခန်း ဘားကောင်တာ master bedroom (4) , living (3), maid (1), dining room 1 ခြံတွင်းကား (၃)...
(42' × 60') ပေကျယ်2RC ရောင်းမည်။
3,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်အမြန်ရောင်းမည် 🏡🏡🏡 သိန်း_3000 ( ညှိနှိုင်း )...
* 1750sqft, တာမွေမြို့နယ် ချမ်းသာဂုဏ်ရောင်Condoတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
*1750sqft * Master bedroom 1 *Normal bedrooms4*ပါကေးခင်း *** ဈေးနှုန်း - သိန်း 2500 (ညှိနှိုင်း) *** * သွားလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန် * နေထိုင်ရန်သင့် နေရာကောင်း * မြို့တွင်းဧရိယာများအတွင်းသို့...
69,000 သိန်း (ကျပ်) | စက်မှုဇုန်
လိူင်သာယာစက်မူဇုန် မြေ(7)ဧက စက်ရုံ (100000)sqft Tra 1000 KVA ရောင်6း9000 သိန်း
ဗဟန်း သံလွင်လမ်းသွယ်တွင် နေရာကောင်းမြေကွက်ရောင်းမည်။
8,500 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ သံလွင်လမ်းသွယ် အကျယ်အ၀န်း (40x60) ပေကျယ်ဝန်းသည်။ နေရာကောင်း ၊ လမ်းကျယ် ၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
09962514187 , 09977901502
အခန်းကျယ် ပေါချောင်ကောင်း တိုက်သစ် ရောင်းမည်
အလွှာမြင့် (6F) တိုက်သစ် အခန်းကျယ် ရမည်... အကျယ်အ၀န်း (18 x 52 ) ပေ ရှိပြီး ၊ ပြင်ဆင်ပြီးသား အဆင်သင့်တက်ရုံပါပဲ... သွားလာရလွယ်ကူပြီး ကမာကြည်တံတားအနီးမှာ တည်ရှိပါသည်...
* ချိုသာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဗဟန်းရွှေတောင်ကြားတွင် လုံးချင်းအိမ်အမြန်ရောင်းမည်။ *
25,080 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
* 95×130 ဂရံ (အမည်ပေါက်) RC2 1sqft -2L
သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်နေရာကောင်း Mini Condo တိုက်ခန်းရောင်းပါမည်။(ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်)
940 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ယခုမိတ်ဆက်ပေးလိုသော Mini Condo(တိုက်ခန်း) လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့၏ အမြဲတမ်း ဆန်းသစ်ခေတ်မီ နေသော interior design များဖြင့် decorated & created ပြုလုပ်ကာ ထုဆစ်ချယ်မှုန်းထားသော .... သာကေတမြို့နယ် ၊ ၆ ရပ်ကွက် ၊...
Shwe Pyi Thar House and Compound for sales, Very nice and decent location, VIP Estate
2,100 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
Original owner, Fully grand land, Good air, Quiet, Fully electricity, water and painting, Ready to stay, 60' x 60' land, very close to main road. Interested Buyer, please contact to Owner for viewing.
01-578818 / 09-43022979 / 65-98285472
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် (1790)sqft 3F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေးခင်း၊ ရေကူးကန်ပါ၊ ဂျင်ပါ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
အလုံကမ်းနားလမ်း AYA Bank အပေါ်ထပ် River View Point Tower ရှိ PentHouse ကွန်ဒိုအခန်းကို ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့်ရောင်းမည်
5,100 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
- အကျယ်အ၀န်းမှာ ( 3694 Sqft )ကျယ်ဝန်းပြီး ၊ အထပ်နှစ်ထပ် ပါရှိသည်။ - ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (3) ခန်း ၊ Master Bedroom ( 1 ) ခန်း ၊ Double Bedroom (2) ခန်း ပါရှိသည်။ - လူနေအိမ် နှင့် ရုံးခန်း တွဲဖွင့်၍လည်း...
09965467579/ 09250039541/ 09796369346
အလုံမြို့နယ် ရွှေဇမ္ဗူဒိတ်ကွန်ဒိုတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
အကျယ်အ၀န်း - 2200 စတုရန်းပေ မာစတာ အိပ်ခန်း -2ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း ဧည့်ခန်း မီးဖိုခန်း နေရာကောင်း သွားလာရေးလွယ်ကူသော နေရာ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ စံပြ(၆)လမ်းရှိ (ပေ 12 x ပေ 50)ရှိသော ဒုတိယထပ် တိုက်ခန်းရောင်းမည်
290 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ စံပြ(၆)လမ်းရှိ အကျယ်အ၀န်း (ပေ 12 x ပေ 50) ကျယ်ဝန်းသည်။ အိပ်ခန်း (1) ခန်း။ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ဘိုထိုင် အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ တန်ဖိုးငွေ။ ။ 290သိန်း(ညှိနှိုင်း) ရေပူ...
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် Hill Top Vista Condo
5,250 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အလုံမြို့နယ်တွင် (1881)sqft 9F မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ River View ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုိက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
4,500 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Hill Top Condo တွင်(2479sqft)ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
4,750 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ဒလမြို့နယ်တွင် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး နေရာကောင်း လုံးချင်း ရောင်းမည်။...
ဒလ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
780 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
(30'x50') ဂရန်မြေပေါ်တွင် (20'x40') နှစ်ထပ်အိမ် လုံးချင်း မင်းတန်းလမ်း၊ မြို့မ(၃)ရပ်ကွက်။ မီတာ၊ စည်ပင်ရေလိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်း၊ အသင့်နေထိုင်ရုံ အိမ်လေးဖြစ်ပါသည်။အသစ်ဆောက်လုပ်မည့်...
မိသားစု အေးချမ်းစွာဖြင့် ပက်ဝန်းကျင်ကောင်းတွင် နေချင်သူများအတွက်
495 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းစစ်ဆေးပြီး သော (6) ထပ်တိုက်ရှိ ပထမထပ် (ဘယ်/ ညာ) ရောင်းရန်ရှိသည်။ တောင်ဥက္ကလာပ ပါရမီဘေလီတံတားအဆင်းမှ ၃ မှတ်တိုင်အကွာ ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ် (41) ရပ်ကွက်...
ပြည်လမ်းမအနီး ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ လူမနေရသေးသော အသစ်စက်စက်လုံးချင်းတိုက်ရောင်းမည်။...
အကျယ်အ၀န်း 60 x 50 ပေရှိသော ခြံဝန်းကျယ်နှင့် အသစ်စက်စက် လူလုံးဝမနေရသေးသော နှစ်ထပ်တိုက်တွင် ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွဲလျက် အခန်း ၆ ခန်း ၊ Mini Bar & Coffee Counter အဆင့်မြင့်မီးဖို၊ japan Aircon 10 လုံး၊...
လှိုင်မြို့နယ်တွင် တိုက်ခန်းများ အရစ်ကျရောင်းချပေးနေပါသည် ။
အမှတ် ၅၉ ၊ မာလာမြိုင် (၇) လမ်း ၊ နှစ်ခန်းတွဲ ၆ထပ်တိုက် ၊ BCC ကျပြီး ၊ GF & LE2 = 790 , 6F = 300 , 5F = 330 , 2F = 460 . အမှတ် 55 ၊ မာလာမြိုင် ၇လမ်း ၊ BCC ကျပြီး ၊ 6F = 300 . အမှတ်2၊ မာလာမြိုင် ၅လမ်း ၊ နှစ်ခန်းတွဲ 6ထပ်တိုက် ၊BCC...
၂၀ပေ×၆၀ပေ၊ တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဂရန်မြေ
580 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၇) ရပ်ကွက်၊ ပညာလမ်း အကျယ်အ၀န်း (၂၀×၆၀)ပေကျယ်ဝန်းသည်။ အိပ်ခန်း (၁) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၇မိုင်၊ 3ထပ်ခွဲလုံးချင်းအိမ်၊ မြေအကျယ်အ၀န်း(60'x75'),အိမ်အကျယ်အ၀န်း(40'x60'),ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်
17,500 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
အကျယ်အ၀န်း 0.25 ဧက ရှိသည့်မြေကွက်ကျယ်ဖြစ်ပြီး ဘိုးဘွားပိုင်မြေကွက်ဖြစ်သည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း ၊အောင်ရတနာဆေးရုံအနီးတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ (ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်)
(၁၆/၂)ရပ်ကွက် ၊သုဒသန(၁)လမ်း ၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။ အောင်ရတနာဆေးရုံအနီး ၊ကျောင်း ၊ဈေးအနီးတွင်ရှိပြီးဆိတ်ငြိမ်သောရပ်ကွက်တွင်ရှိပါသည်။ အခန်းအကျယ်အဝန်းမှာ...
09777076297 / 09421129093
တည်နေရာ = ၇ မိုင်၊အောင်တေဇလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ အကျယ်အ၀န်း = 3310Sqft , (100'/30'×50'/100') Building Type =2RC Room Type = (5)MBR,(1)SBR,(1)Maid Room, Selling Price = 8500 Lakh (Negotiate) Remark = Including A/C, Jaccuzi,ရေပူ/ရေအေး ပါသည်။ =...
M.M.M Condoတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
2,600 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
- M.T. P Condo (အလွှာမြင့်) - 2200 Sqft - မာစတာ(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုး(၂)ခန်း၊ အဲကွန်း၊ ကျွန်းပါကေးခင်း - (1M, 2B, A/C,) အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
27,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ဗဟန်း၊ ရွှေတောင်ကြားလမ်း၊ 2ထပ်ခွဲ လုံးချင်းအိမ်၊ မြေအကျယ်အ၀န်း(47'x82'),အိမ်အကျယ်အ၀န်း(42'x80'),1MBR, 2BR, ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊ အသင့်နေထိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ထားသော Star City Condo ရောင်းရန်ရှိသည်။
လှည်းကူး	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
7,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
လှည်းကူးမြို့နယ်တွင် ခြံအကျယ်(140 x 320) အိမ်အကျယ်(30 x 30) 1RC ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၂)လုံး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
ကြယ်ဝန်းစံ ဆောက်လုပ်ရေးမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သော နေထိုင်ခွင့်ကျပြီး၊ အခန်းကျယ်၊ဈေးနီး၊ကျောင်းနီး၊သွားလာရလွယ်ကူပြီး ရပ်ကွက်ကောင်း၊သောနေရာတွင် တိုက်ခန်းများရောင်းရန်ရှိသည်။...
တောင်ဥက္ကလာပ၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ အနော်မာ ၃ လမ်း ၁၈ပေ×၅၂ပေ မြေညီ ၁၂ပေ အမြင့် =680သိန်း 5လွှာ=350
ရွှေဟသာင်္ကွန်ဒိုတွင် ပြင်ဆင်ပြီး အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
7,000 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အကျယ်အ၀န်း 1760 စတုရန်းပေရှိပြီး2Master Bedrooms, 1 Single Bedroom,Living Room,Made Room, Dinning Room တို့ပါရှိသည်။
09 97790 1510
လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည် သုဝဏ္ဏ VIP III ခရေမြိုင်လမ်း
13,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (60 x 80) 3RC မာစတာအိပ်ခန်း(၄)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ ပြင်ဆင်ထားသော လုံးချင်းအိမ်ေ၇ာင်းရန်ရှိပါသည်
တိုက်ခန်း အမြန်ရောင်းရန်ရှိပါသည် သုမနလမ်းသွယ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် (15 x 60) 2F ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၂)လုံး၊ ပရိဘောဂပါ၊ ပြင်ဆင်ထားသော တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
09-420035080,09-31047965, 09453222007, 09-799770046
ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်တွင် ကွန်ဒိုရောင်းရန်ရှိသည်။
ပေ၃၀xပေ၆၀ ကျယ်ဝန်းသော ကွန်ဒိုရောင်းမည်။ အမှတ်(၁၇၄/၁၇၆)ဒုတိယထပ်/၁၀ရပ်ကွက်/ပုဇွန်တောင်မြို...
* 2000sqft, လသာမြို့နယ် River Side Condoတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
_ 20×100 _ Master bedroom 1 _ Normal bedrooms2_ ကြွေခင်း *** ဈေးနှုန်း - သိန်း 2700 (ညှိနှိုင်း) *** _ Lift _ သွားလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန် _ နေထိုင်ရန်သင့် နေရာကောင်း
Ngwe Saung Business Group Construction မှတိုက်​ခန်းများဝယ်​ယူအား​ပေးကြ​သောမိတ်​​ဟောင်းမိတ်​သစ်​များကိုအထူး​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ တည်​​နေရာ - အမှတ်​215 ၊ယုဇနလမ်းသွယ်​ ၊ ရပ်​ကွက်​ ၊ ​အောင်​သိဒ္ဓိ ၊...
ဒေါပုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
320 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
၄လွှာဘယ်/ညာ[ 12.5×47] တစ်ခန်း၃၂၀သိန်း ပြင်ပြီး/ရေချိုးခန်း အိမ်သာ/မီးဖိုကြွေပြားအပြည့်ခင်းပြီး ပိုင်ဖောင်ဒေးရှင်း capital/orange/citymark banks/ဈေး/ကျောင်နီး နွယ်အေး/ဒေါပုံ
ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီးနှင့် အနီးဆုံးနေရာတွင် ကျယ်ဝန်းသောခြံကွက်အား ရောင်းရန်ရှိပါသည်
87,120 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ဘိတ်သနိုးလမ်း ၊ ကမ္ဘာအေးလမ်းမကြီးမှ (၃) ခြံမြောက် ၊ နံယန်ကျောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်း ၊ အကျယ်အဝန်း (0.33) ဧက ၊ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး...
သာကေတ မြို့နယ် ရွှေသပြေရိပ်မွန်အိမ်ယာ (၂)တွင် အသင့်ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။...
6,500 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
သာကေတမြို့နယ် ၊ ရွှေသပြေရိပ်မွန်အိမ်ယာ(၁) ၊ခြံအမှတ် (၅၄) အကျယ်အ၀န်း (3730 sqft) (83'x46') ဂရံအမည်ပေါက် ၊ 2RC ၊ ၀ရန်တာ ပတ်လည်ပါရှိ ၊4Master Bed Room , Maid Room ပါ ,4Air-con Decoration , ကိုရီးယားပါကေးခင်းပြီး ၊ steel tank 2လုံး ၊...
ဒေါပုံမြို့နယ်တွင်တိုက်ခန်းအသစ်ရောင်းရန်ရှိသည်။(12.5×50) sqft ရှိသည်။Hall type...
၁၈ပေx၅၄ပေ ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ (မြောက်ဥက္ကလာပ)
230 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
လိပ်စာ - သုမာလာ(၄)လမ်း မြောက်ဥက္ကလာ မယ်လမုဘုရားအနီး ဘုန်းကြီးလမ်းတစ်ဆစ်ချိုး။ လုပ်​ငန်းပြီးစီးမှု - 40% ပေ၂၀xပေ၆၀ မြေကွက်ပေါ်တွင်ဆောက်လုပ်သော ၁၈ပေx၅၄ပေ...
(၂၀'x ၆၀')၊ လုံးချင်းတိုက်အိမ်၊ (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
450 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းမည် ( နေထိုင်လိုသူများအတွက် ကောင်းဆုံး လှပ ခိုင်ခံ့စွာ တည်ဆောင်ထားချင်းဖြစ်သည်) ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ၈ ရပ်ကွက် ယောမင်းကြီးလမ်း အကျယ်အ၀န်း (၂၀'x ၆၀') ဂရံမြေ...
09453781912, 6591014230, 6593394967
လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း ၁၂ပေခွဲပေ၅၀ ၄လွှာ ခေါင်းရင်းခန်း Air con တစ်လုံးပါ ရှထိုးခင်းထားသည်။ ဧည့်ခန်းမီးဖိုချောင်ကြွေပြားကပ်ထားသည်။ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါသည်။ ဘိုထိုင်အိမ်သာ...
၁၂ပေခွဲ×၅၀ပေ၊ မြေညီအပေါ်မှန်ခန်း တိုက်ခန်း၊ BCC ကျပြီး
အမှတ် (၈၂)၊ မာလာမြိုင် (၇) လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ် အကျယ်အ၀န်း (12.5×50) ပေကျယ်ဝန်းသည်။ Hall ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ မြေညီထပ်အပေါ် မှန်ခန်း BCC ကျပြီးဖြစ်သည်။ ပါရမီစိန်ဂေဟာ၊...
(1500Sqft)ကျယ်ဝန်းပြီး 24hrs လျှပ်စစ်မီးရသောအခန်းဖြစ်ပါသည်။1Master Bedroom.2Bedroom .1kitchen.ဘုရားခန်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်းပါကေးခင်းထားပြီး မီးဖိုခန်း ရေချိုးခန်း အိမ်သာ...
55,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ KBZ ရိပ်သာလမ်း တွင် တည်ရှိသည်။ မြေအကျယ်အ၀န်း (0.282) ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း (8) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံ၊...
၂၅ ပေ ၅၀ပေ ဓာတ်လှေကားပါ တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။
1,490 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
1* 25×50 ပေ 2* Pile Foundation and Ready mix concrete 3* 9' height 4* အလင်းရောင်နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောပြတင်း ပေါက်ကျယ်များ 5* 10 ယောက်စီး sigma ဓာတ်လှေကား 6* မာစတာအိပ်ခန်း - 1 ခန်း ၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း -2ခန်း 7* Luminated Floor 12 mm...
ဆင်မင်းလမ်းအနီးတွင် ဈေးနှုန်းသင့်တော်သော အထပ်နိမ့်တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
390 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ဆင်မင်းလမ်းနှင့် ကွင်းချောင်းလမ်းကြား ၊ အောင်ဇေယျလမ်း ၊ ကမ်းနားဘလောက် ၊ အလုံမြို့နယ် ၊ အကျယ်အဝန်း (၁၂ ပေခွှဲ × ပေ ၆၀) ၊ တိုက်ခန်း ၊ ပထမထပ် ။ အခန်း (၁)ခန်း ဖွဲ့ထားပြီး ၊...
ဒုတိယထပ် (၃) လွှာ တိုက်ခန်း BCC ကျပြီး
အမှတ် (၂၃၃)၊ ဇဗ္ဗူသီရိ (၈) လမ်း၊ အနောက် (၆) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။ ဒုတိယထပ် (၃) လွှာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ BCC ကျပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်၍ ဆောက်ထားသည်။...
စမ်း​​ချောင်း မင်းလမ်းရှိ ၅လွှာတိုက်​ခန်း​ရောင်းမည်​ အသင့်​​နေနိုင်​
မင်းလမ်း 18×40 ပါ​ကေးခင်းဘိုထိုင်​အိမ်​သာ အိပ်​ခန်း ၁ခန်း AC ၁လုံး ၅လွှာ (တမိုး​အောက်​ ) 600ls ညှိနှိုင်း​ဈေး
Hill Top Vista Condo တွင်ကွန်ဒိုအခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
5,130 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
Hill Top Vista Condo , 1900 Sqft, 1 Sqft= 2.7 L အလွှာမြင့် Master Room(3), Single Room(1), Air-con(5), ဘုရားခန်း၊ ထောင့်ခန်း ရွှေတိဂုံးဘုရား, River View များနှင့်စိတ်အပန်းပြေစေနိုင်ပါသည်။
၂၅ပေ×၅၀ပေ၊ ၅ လွှာ တိုက်ခန်း (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
545 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
သင်္ဃန်းကျွန်း ဘ၀မြင့်ရိပ်သာလမ်း (လမ်းသန့်) ၊ ၅ ထပ်၊(အပေါ်ဆုံးထပ်မဟုတ်ပါ)၊ အကျယ်အ၀န်း (25x50) ပေ ကျယ်ဝန်းသည်။ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ ကောနစ်ကပ်၊...
09450002849 , 09970650000
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ VIP(3), 3ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ မြေအကျယ်အ၀န်း(60'x80'), 4MBR, 1BR, ရေကူးကန်ပါ၊ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
သစ္စာရိပ်သာကွန်ဒိုတွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေအခန်းရောင်းမည်။
အကျယ်အ၀န်း 1400 စတုရန်းပေရှိပြီး၊2Mbr၊1Br၊Lift ပါရှိသည်။ပါကေးခင်းထားပြီး၊ကြွေပြားခင်း+ကပ်ဖြစ်သည်။ ကားပါကင် လုံခြုံရေးတို့ပါရှိသည်။
09 97790 1503
ပုလဲကွန်ဒို ၊ 1780 Sqft မာစတာ(၁)ခန်း၊ အိမ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲကွန်း(၄)လုံး၊ ပါကေးခင်း ၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံနှင့် အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ 1M, 2B, 4A/C, ပါကေးခင်း၊ F.F
၁၂.၅ ပေ × ၅၀ ပေ ၊ မြေညီထပ်မှန်ခန်း(အသင့်နေထိုင်နိုင်)
1,100 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မြေညီထပ်မှန်ခန်းအရောင်း 12ပေခွဲ50 ပေကျယ် ၂ ထပ် မှန်ခန်း (High 10+7') ဣစ္ဆာသယလမ်း၊ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊တာမွေ...
မြောက်ဒဂုံ ၃၉ရပ်ကွက်ရှိ ၂ကွက်တွဲမြေကွက်အမြန်ရောင်းမည်
2,300 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင်ဟော်တယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်သူများအတွက်သင့်တော်သော- အလွန်တန်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် 50ပတ်လည်မြေကွက်၂ကွက်တွဲ(100'×50')အကျာ်ရှိမြေကွက်ကျယ်အမြန်ရောင်းပါမည်။
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် ၉မိုင် Ocean Condo
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် (1350)sqft 7F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၄)လုံး၊ ရေပူရေအေးပါ ပြင်ဆင်ထားသော ...
ပြည်လမ်းမမှမစိုးရိမ်လမ်းသွယ်(၃)လမ်း၊ ၉ မိုင် တွင်လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
4,000 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
တည်နေရာ = ပြည်လမ်းမမှမစိုးရိမ်လမ်းသွယ်(၃)လမ်း၊ ၉ မိုင်။ အကျယ်အ၀န်း = (51'×71') အမျိုးအစား = 1ထပ်ခွဲတိုက် မြေအမျိုးအစား = ဂရန်မြေ ဈေးနှုန်း = 4000သိန်း (ညှိနှိုင်း) အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက...
430 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပုလဲလမ်းမအနီး ဈေးနီး ကျောင်းနီး ကွန်ကရစ်လမ်းကျယ်ပေါ်ရှိ အကျယ်အ၀န်း ပေ (၄၀×၆၀) ကျယ်ဝန်းသည်။ ပါမစ်မြေကွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက...
တာမွေမြို့နယ်၊ တောင်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းတွင် ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။...
ပေအကျယ်(25x60)ရှိပြီး Master ၁ခန်း၊ Bedroom ၁ခန်းဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျွန်းပါကေးခင်းထားသည်။ ရေပူ/အေးပါသည်။ အဲယားကွန်း ၃လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ နေရာအလွန်ကောင်းသည်။ တတိယထပ်ဖြစ်သည်။...
* 1500 sqft * Master Bed Room 1 * Single Bed Room2* Air Cons5** ဈေးနှုန်း - 4500သိန်း (ညှိနှိုင်း) ** * Lift * Car Parking * တိုက်သစ်
385 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ် တွင် တည်ရှိသည်။ အကျယ်အ၀န်း (19'x54') ပေကျယ်ဝန်းသည်။ hall type မြေညီထပ်ဖြစ်သည်။ ကြွေပြားအပြည့်ခင်းပေးထားပါသည်​။ မီးဖို​ချောင်​ ​ရေချိုးခန်း အိမ်​သာ...
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ - 25' x 100' - ဂရံအမည်ပေါက်၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် (22 x 78) 5F မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပါကေး၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၈မိုင်ခွဲ၊ 2ထပ်လုံးချင်းအိမ်၊ အကျယ်အ၀န်း( 42'x70'), ပြင်ဆင်ပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည်။
Ruby 36 Condo တွင်(1030sqft)ရှိသောကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းမည်။
ကျောက်တံတား	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,700 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ ၁၃ပေx၅၅ပေ(၅လွှာ) ခေါင်းရင်းခန်း ရောင်းမည်
270 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ကောလိယလမ်း, ၅လွှာ, အခန်းအကျယ် ၁၃ ပေ ၅၅ ပေ ခေါင်းရင်းခန်း, Hall, RC, အမြင့် ၉ ပေ, ကျောင်း, ဈေး , KBZ Bank , အောင်ရတနာဆေးခန်းတို့နှင့်နီး၍ မလိခအိမ်ရာမျက်စောင်းထိုး, ရတနာလမ်းမကြီးနှင့် တစ်လမ်းကျော်,
အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်းမရှိ ​​​Golden Oak ကွန်​ဒို ​ရောင်းမည်​ ပြင်​ဆင်​ပြီး
လှိုင်​ **အုတ်​ကျင်းဘူတာရုံလမ်းမ​ပေါ် ** ကွန်​ဒိုအသစ်​ (အရမ်းသန့်​) ** တစ်​ခန်းလုံး ပါ​ကေးအပြည့်​ခင်းထား , အိပ်​ခန်း(၃)ခန်းပါ ,M(1) , BR(2) , တစ်​အိမ်​လုံး...
မုဒိတာ(2) အင်းစိန်တွင် ကွန်ဒိုအခန်းများအား ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
130 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မုဒိတာအိမ်ရာ (2) အင်းစိန် ၊ ပေါက်တောဝအနီး ၊ မြေညီရှေ့ခြမ်း = သိန်း (300 - 350 ) ကြား မြေညီနောက်ခြမ်း = သိန်း (200 - 225 ) ကြား ပထမအလွှာ = သိန်း (160 - 170 ) ကြား ကျန်အလွှာများ သိန်း ( 150~130 ) ကြား...
၁၂ ပေ ခွဲ ၅၀ ပေ အခန်းများရောင်းမည် ရင်ကွဲ ***မြေညီထပ် =၃၈၀သိန်း ၊အမြင့်၁၀ပေတစ်ခန်းလုံးကြွေပြားခင်းပြီးဘိုထိုင်အိမ်သာမီးဖိုခုံဘေစင်ကြွေပြားခင်းပြီးအဆင်သင့်နေထိုင်ရုံ / *** ပထမထပ်...
River View Point Tower မှ​ရောင်းရန်​ရှိသည်​ ။
5,300 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
TOWER (A) တွင် အခန်းနံပါတ် - 905 , 1205 နှစ်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည် ။ TOWER (B) တွင် အခန်းနံပါတ် - 406,606,804,803,702,801 အခန်းများရောင်းရန်ရှိသည် ။ Facilities , 1MBR , 2BR , Store , Kitchen , GYM , swimming Pool , Child Play Ground , Car Parking , Pure Water , Fire Alam , Internet Fees 15000ks , Maintainent Fees 65000ks . 1950sqft ,...
သရက်​​တောလမ်းသွယ်​ ကြည့်​မြင်​တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း အကျယ်အ၀န်း (​12.5'x 55') ကျယ်ဝန်းသည် ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (2) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ပါဝင်သည်။ ပါ​ကေးခင်းထားပြီး...
ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည် Golden City Condo
ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် (2000)sqft 9F မာစတာအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊ ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
ဗဟိုလမ်းမကြီး၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ၁၆ ရပ်ကွက်၊ မာလာမြိုင် ၇ လမ်း ၊ဈေးနီး၊စိန်ဂေဟာနီး ၁၂ပေခွဲ×47ပေ မြေညီ ၁၇ပေ အမြင့် ထပ်ခိုးပါ=720
Star City တွင် (905sqft)ရှိသော ကွန်ဒိုအမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။
1,450 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
4,000 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် (2000)sqft 7F မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေး၊ တိုက်သစ် ပြင်ဆင်ထားသော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်
160 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်ပေါက်တောဝ အကျယ်အ၀န်း (၁၅ပေ×၄၀ပေ) မာစတာအိပ်ခန်း (၁) ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း (၁) ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ရေ၊ မီး (၂၄) နာရီ ဓါတ်လှေကားပါ တတိယထပ်...
ကွန်​ဒိုတိုက်​ခန်း​​ရောင်းမည်​ မိုး​ကောင်း သစ္စာရိပ်​သာကွန်​ဒို
ရန်​ကင်းမြို့နယ်​တွင်​ (1400)sqft 2F မာစတာအိပ်​ခန်း(၂)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်​ခန်း(၁ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၃) ပါ​ကေး ပြင်​ဆင်​ထား​သော ကွန်​ဒိုတိုက်​ခန်း​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​
မရမ်းကုန်း(၁)ရပ်ကွက်..၊ သမိုင်းမြို့သစ်..။ သမိုင်းဖြတ်လမ်း(၄)..။
210 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
မရမ်းကုန်း(၁)ရပ်ကွက်..၊ သမိုင်းမြို့သစ်..။ သမိုင်းဖြတ်လမ်း(၄)..။ ၁၂ခွဲ*၅၀ပေ..။ ပထမထပ်..။ Hall Type..။ မပြင်ဆင်ရသေး..။ ဆောက်လုပ်ခွင့် ဘုတ်စိမ်းပါပါသည်..။ ဘီစီစီ မပါပါ..။ တိုက်သစ်..။ အိမ်ငှား ၆လ...
1,300 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
အိမ်အမှတ် (ခ/784) ၊အဿက(၂၆)လမ်း၊၁၃ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာလမ်းမကြီးကျောကပ်လမ်း၊၁၃ဈေးရှေ့လမ်း၊ ထောင့်ကွက်ဘေးအိမ်၊တောင်ဥက္ကလာမြို့ ။ ပေ (၂၁' × ၇၀')၊၁ထပ်ခွဲတိုက်ခံအိမ်တစ်လုံးပါ၊ အိမ်သာ ရေချိုး...
2,200 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
🏩မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ဈေးနှုန်းတန်သော လုံးချင်းအိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ🏩 👉ရပ်ကွက်သန့် သော ၃၅ ရပ်ကွက် 👉ငွေတောင်သစ္စာလမ်း 👉ပင်လုံလမ်းမကြီးအနီးလေးဗျာ 👉40*60...
800 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
အိပ်ခန်း ၂ခန်း. ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွဲလျက် ၁ခန်း. ဧည့်ခန်းမကျယ်. အော်တိုမီတာတစ်လုံး. ဓာတ်လှေကားပါ. ၃လွှာ. ကားပါကင် အိုခေ. လမ်းသန့်. နောက်ဖေး အရေးပေါ်လှေကားသန့်. ရေမော်တာ အိုခေ. ၂၄ နာရီ...
မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံလမ်းမကြီး နှင့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတို့အနီးရှိ ၂ထပ်တိုက်အသစ်စက်စက်
2,700 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
■ မြောက်ဒဂုံပင်လုံလမ်းမကြီးနှင့်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတို့အနီး ■ မြေအကျယ်ပေ(၄၀'×၆၀')တွင်ဆောက်ထားသော ■၂ထပ်Rcတိုက်သစ် ■ဧည့်ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်း ၊ မီးဖိုခန်း...
09401620842 , 09250008141
မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အကြောင်းအရာ(topic) ---------------------
နေထိုင်ရန်နှင့် ဘဏ် ၊ ဆေးခန်း ၊ စတိုးဆိုင် ၊ အလှပြင်ဆိုင် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ၊ကုန်မျိုးစုံဆိုင်...